Akhriso Qodobada ay Ku Heshiiyeen Dowladda Federaalka iyo Maamulka Somaliland – Radio Muqdisho
Wada hadaladii u dhexeeyay dowlada dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ee ka socday Wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa la soo gaba gabeeyay, iyada oo laga soo saraay qodobo lagu heshiiyay.
In la dar dargeliyo wada hadalada labada dhinac, isla markaana waqti lagu jaangooyo.
In arrimaha siyaasadda ee masiiriga ah lagu dhiirado, lana fuliyo waxyaabihii horey loogu heshiiyay.
In laga fogaado wax kastoo wada hadallada carqalad gelin kara
In aan la siyaasadeen deeqaha beni’aadannimo, maashaariicda dib u dhiska lana dhiirageliyo.
In la fuliyo heshiiskii hawada ee labada dhinac u dhaxeeyey, iyadoo hab farsamo lagu saleeyo.
In Wada hadalada laga qeyb geliyo dowladda Jabuuti, marka loo baahdo.
In si wadadjir ah looga wada qeyb-galo wada hadallada labada dhinac u dhaxeeya, iyadoo khubarro farsamo iyo dowlado saaxiibo ah oo ay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland loo saaro arrintaan
In wada hadalada xiga ay dhacaan 26-27-ka ee bisha February ee sanadka soo socda laguna qabto magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, si arrimahaan loo sii ambaqaado.
Akhriso Heshiiska oo Qoraal ah